Phone ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ? မပျောက်ခင်မှာ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲ? - Khit Minnyo
Unlabelled Phone ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ? မပျောက်ခင်မှာ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲ?
Phone ပျောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုရှာကြမလဲ? မပျောက်ခင်မှာ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုမလဲ?
by KhitMinnyo on July 21, 2018
ဖုနျးပြောကျဖူးကွသူ အတျောမြားမြား တှဖေူ့းပါတယျ။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ဖုနျးပြောကျဖူးပါတယျ။ ဒါကွေောငျ့ ဖုနျးပြောကျသှားတဲ့အခါ ဘယျလိုပွနျရှာ ကွမလဲ ဆိုတဲ့မေးခှနျးက လူအတျောမြားမြားအတှကျ သိခငျြစိတျအပွငျးဆုံးမေေးခှနျးအမြိုးအစားထဲ ပါနပေါတော့တယျ။
ဖုနျးပြောကျတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ပွောမှာဆိုတော့ ဖုနျးပြောကျတဲ့အခွအေနေ နှဈရပျ ခှဲလိုကျရအောငျ။
၁။ ဖုနျးဝယျလာကတညျးက Screen lock လေးပဲ ခထြားတယျ။ ကနျြတာ ဘာမှလုပျမထားဘူး
၂။ ဖုနျးဆိုတာပြောကျတတျတဲ့အရာဖွဈလို့ ပြောကျသှားတဲ့အခါ အဆငျပွစေဖေို့ ကွိုတငျစီစဉျထားတယျ။
အထကျပါ အစုနှဈခုမှာတငျ ဘယျသူကတေ ပွနျရနိုငျမယျ။ ဘယျသူကတော့ ပွနျရဖို့ခကျတယျ ဆိုတာ သိနိုငျပါတယျ။ အုပျစု ၁ မှာသာ ပါခဲ့ရငျတော့ ဖုနျး ရသှားတဲ့သူက လာပွနျပေးမှသာပွနျရနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ဖုနျးတှပြေောကျရှတာတှကေို မပွောခငျပေါ့။ စကားနညျးနညျး ရှညျပါရစေ။
ယနခေ့တျေမှာတော့ ဖုနျးတှမှော အသုံးပွုသိုလှောငျမှုမြားလာတာနဲ့အမြှ သိုလှောငျနိုငျစှမျးမွငျ့မားတဲ့ Storage ပမာဏကို ထညျ့သှငျးလာကွပမေယျ့ ကြှနျတျောတို့နိုငျငံက လူအမြားစုကတော့ SD card ထပျစိုကျလို့ရတဲ့ ဖုနျးတှကေိုသာ ပိုမိုနှဈသကျနဆေဲ ရှိတာကို တှရေ့ပါတယျ။ SD ကဒျစိုကျသုံးလို့ရတော့ ပိုမကောငျးဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါမယျ။ SD ဆိုတာ Internal Storage လောကျ လငျြမွနျခွငျးရှိ မရှိ စတာတှေ မပွောတော့ပါဘူး။
ခုလို ဖုနျးပြောကျတာ (ရိုးရိုးပြောကျတာရှိမယျ၊ ခိုးခံရတာလညျးရှိမယျ) ကွုံတဲ့အခါ Information Security လို့ချေါတဲ့ခကျြအလကျလုံခွုံရေးနဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာ လြှို့ဝှကျခကျြတှကေို SD ထဲမှာ ထားမိထားရငျတော့ ဖုနျးပြောကျတာထကျ ဆိုးသှားတဲ့အခွအေနမြေိုး ကွုံရနိုငျပါတယျ။
မိမိတို့မိမိ လြှို့ဝှကျရိုကျထားမိတဲ့ ပုံတှေ၊ ဗီဒီယိုတှကေိုတော့ SDံ ထဲမှာ ဘယျတော့မှ မသိမျးမိအောငျ ဂရုစိုကျကွစလေိုပါတယျ။အကောငျးဆုံးကတော့ SD မလိုတဲ့ဖုနျးတှကေိုသာ ရှေးခယျြသုံးသငျ့ပွီး SD ကို အားမပွုဖို့ဖွဈပါတယျ။
Storage မြားတဲ့ (32GB, 64GB, 128GB, 25GB, ..) ဖုနျးတှကေိုမှ ဝယျမသုံးနိုငျတာလို့ ပွောကောငျး ပွောမယျ့သူတှေ ရှိနိုငျပါတယျ။ ဒီဘကျခတျေ ဖုနျးတိုငျးနီးပါးမှာတော့ OTG လို့ချေါတဲ့ USB One The GO သုံးလို့ရအောငျ ဖနျတီးပေးထားတာမို့လို့ OTG stick တှကေိုသုံးပွီး သိမျးထားနိုငျပါတယျ။ (OTG မပြောကျအောငျတော့ ဂရုစိုကျရပါမယျ)
IMEI သိတယျ ဖုနျးကို ဘယျလိုရှာရမလဲ?
ဒါကတော့ ကြှနျတေျာ့ဆီ မေးလာတဲ့လူတိုငျးနီးပါး ပထမဆုံးမေးလရှေိ့တဲ့ မေးခှနျးပါ။ IMEI ဆိုတာ International Mobile Equipment Identity ကို အတိုကောကျရေးထားတာဖွဈပွီး SIM card ထညျ့ပွီးသုံးရတဲ့ device တိုငျးမှာပါတဲ့ နံပါတျတဈခုဖွဈပါတယျ။
တဈကမူဘာလုံးမှာ တူညီတဲ့နံပါတျ နှဈခု မရှိဘူးလို့ ဘယျလိုပငျပွောပွော ကြှနျတျောကတော့ တကယျ မယုံပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ဆီမှာ တှရေ့အမြားဆုံးသော ဖုနျးတှသေညျ China က လာပါတယျ။ IMEI တှေ ထပျနတေဲ့ China Phone တှလေညျး အမြားကွီးပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့နဲ့ IMEI တူတဲ့သူ မရှိနိုငျဘူးလို့တော့ တဈထဈခြ တှေးမထားသငျ့ပါဘူး။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ China Mobile Company (Mandalay) မှာ IMEI နံပါတျတှကေို အလုံးရာထောငျခြီ ပွောငျးပေးခဲ့ရဖူးသလို သူတို့ဘာသာ ဖနျတီးထားတဲ့ သူတို့နာမညျတံဆိပျ နဲ့ IMEI နံပါတျတှပေါတဲ့ ကပျခှာ (စတဈကာ) တှေ ထိုငျကပျပေးခဲ့ရဖူးပါတယျ။ (အဲသညျမှာ တဈလတိတိ အလုပျလုပျခဲ့ဖူးပါတယျ)
ဒီတော့ IMEI ဆိုတာ ကြှနျတျောတို့ အားကိုးလို့ရမယျ့ အရာတဈခုလို့ တဈထဈခြ မသတျမှတျထားသငျ့ပါဘူး။ နောကျတဈခကျြက IMEI သိရုံနဲ့ ကြှနျတျောတို့ဖုနျးရဲ့ ရောကျရှိနတေဲ့ တညျနရောကို ရှာလို့ရတယျ ဆိုတာလညျး လုံးဝ လုံးဝ မမှနျပါဘူး။ IMEI ကိုလညျး သိရမယျ အဲသညျကနတေဈဆငျ့ ပွနျရှာရာမှာ ကူညီပေးနိုငျမယျ့ Application ကိုလညျး ထညျ့သှငျးထားမယျဆိုမှသာလငျြ ဖွဈနိုငျခြေ အနညျးငယျ ရှိပါလိမျ့မယျ။
IMEI နံပါတျကို သိခငျြရငျ ကြှနျတျောတို့ ဖုနျးထညျ့တဲ့ Box မှာလညျး ပါသလို မညျသညျ့ဖုနျးမှာမဆို အောကျပါအတိုငျး ရိုကျထညျ့ရှာဖှနေိုငျပါတယျ။
*#06# ကိုချောလိုကျရုံနဲ့ အထကျပါအတိုငျး IMEI နံပါတျတှကေို မွငျရပါမယျ။
Setting ထဲကနလေညျး ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Setting ထဲမှာတော့ About Phone ထဲမှာ ကွညျ့ရမှာဖွဈပွီး ဖုနျးတဈလုံးနဲ့တဈလုံးတော့ ကှာခွားမှုရှိပါတယျ။ အခြို့ဖုနျးတှမှော About Phone ထဲ ဝငျရုံနဲ့ တှရေ့မှာဖွဈပွီး၊ အခြို့ဖုနျးတှမှောတော့ About Phone >> Status >> IMEI Information စသညျဖွငျ့ အဆငျ့ဆငျ့ ဝငျကွညျ့ရတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။
ဖုနျးဘူးခှံပျောက IMEI ပုံစံနဲ့ iPhone တှမှောဆိုရငျ နောကျကြောမှာ IMEI နံပါတျတှေ ပါတဲ့ပုံစံကို အောကျပါပုံမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Single SIM လို့ချောတဲ့ SIM တဈကဒျပဲ သုံးရတဲ့ဖုနျးတှမှောတော့ IMEI နံပါတျတဈခုသာ တှရေ့မှာဖွဈပွီး Dual SIM ထညျ့သုံးလို့ရတဲ့ ဖုနျးတှမှောတော့ IMEI နှဈခု တှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။
IMEI ဆိုတာ ကွညျ့ရတာလညျး လှယျလှနျးသလို ပွောငျးရတာလညျး လှယျလှနျးလို့ ဖုနျးပွနျရှာတဲ့နရောမှာတော့ အားကိုးလို့ မရနိုငျပါ။
IMEI နဲ့ပတျသကျပွီး ပွောပွခွငျးသာဖွဈပွီး ကြှနျတျောတို့ ဖုနျးလညျး ပြောကျသှားတယျ IMEI ပဲသိပွီး ကနျြတာ မသိဘူးဆိုရငျတော့ ပြောကျသှားတဲ့ဖုနျးကိုချော လကျခံဖွရေငျ ပွနျတောငျး ပွနျပေးရငျယူ မဟုတျရငျတော့ လှူ လိုကျတာ ကုသိုလျရပါတယျ။
ကွိုတငျပွငျဆငျနညျး - ၁
ခုနောကျပိုငျး Android Version တှလေညျး မွငျ့လာသလို လုံခွုံရေးစနဈတှလေညျး အားကောငျးမောငျးသနျ ရှငျသနျလာတာကို တှရေ့ပါမယျ။ လုံခွုံရေးကို ထညျ့စဉျးစားတဲ့ ဖုနျးတိုငျးလိုလိုမှာ ကာကှယျရေးစနဈတှအေပွငျ ပြောကျဆုံးသှားတဲ့အခါ ရှာဖှနေိုငျဖို့စနဈတှကေိုပါ ထညျ့သှငျးဆနျးသဈလာကွပါတယျ။ Google Service ကောငျးစှာရတဲ့ ဖုနျး(OS) အမြိုးအစားတှမှောတော့ Google LLC က အခမဲ့ထုတျထားပေးတဲ့ Find My Device ဆိုတဲ့ Application ကို ထညျ့သှငျးအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးထဲမှာ Gmail account တဈခုထညျ့သှငျးထားဖို့လိုပါမယျ။ Find My Device ကို Google Play Store ကနေ ဒေါငျးယူလိုပါက ဒီစာကွောငျးလေးကို နှိပျပါ။ App ထညျ့သှငျးပွီးပါက Setting မှာ ပွငျဆငျစရာလေးတှေ ကနျြပါသေးတယျ။
Security & lock screen ဆိုတဲ့ထဲဝငျပါ။
Device administrators ဆိုတဲ့နရောအထိ ဆငျးလိုကျပါ။
Device Administrator ထဲက Find My Device ဆိုတဲ့နရောမှာ အမှနျခွဈလေး ပေးလိုကျပါ။
ပွီးရငျ Back ပွနျထှကျပါ။
အထကျပါ သုံးပုံရဲ့ ညာဘကျအစှနျကပုံလို Find My Device မှာ On ဖွဈနဖေို့ လိုပါတယျ။ On မဖွဈသေးရငျ ဖှငျ့ဝငျပွီး On လိုကျပါ။
နောကျတဈဆငျ့အနနေဲ့ Setting ထဲမှာ ဆကျပွငျစရာရှိပါသေးတယျ။ တညျနရောရှာတဲ့အခါ တိကမြှု ရှိစဖေို့အတှကျ
Location ထဲဝငျပွီး On ထားဖို့ လိုအပျမှာဖွဈသလို
Mode ဆိုတဲ့နရောမှာလညျး High Accuracy ဖွဈအောငျ ပွောငျးထားဖို့လိုပါမယျ။
ပိုတိကစြဖေို့ပါ။ အောကျပါပုံမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
Mode မှာ high accuracy ပွောငျးတာကတော့ လှယျပါတယျ။ အောကျပါပုံမှာ ကွညျ့နိုငျပါတယျ။
High Accuracy ပွောငျးပွီးသှားတဲ့အခါ အဲသညျ Mode အောကျပါမှာ ရှိတဲ့ Google Location History ဆိုတဲ့ထဲကို နှိပျဝငျလိုကျပါ။ အထကျပါပုံသုံးပုံရဲ့ ညာဘကျအစှနျပုံထဲကနရောပါ။
Location History နရောမှာ ပိတျနရေငျ ဖှငျ့ပေးထားပါ။ ပှငျ့နရေငျတော့ ဘာမှလုပျစရာ မလိုပါ။
အထကျပါအဆငျ့တှအေတိုငျး ထညျ့သှငျးထားတဲ့ မိမိတို့ဖုနျးတှေ ပြောကျသှားတဲ့အခါ အခွားဖုနျးတဈလုံးကနဖွေဈစေ၊ ကှနျပြူတာကနဖွေဈစေ အလှယျတကူ ရှာတှနေို့ငျမှာဖွဈပါတယျ။
အခွားဖုနျးရဲ့ Browser ကိုဖှငျ့ပါ။ android.com/find လို့ရိုကျထညျ့ပွီး enter လိုကျပါ။
မိမိတို့ပြောကျသှားတဲ့ဖုနျးရဲ့ Find Device မှာခြိတျထားတဲ့ Google Account (gmail) ကို ရှာခငျြတဲ့ Browser မှာ ထညျ့ရပါမယျ။ ဒီနရောမှာ အခကျတှကွေ့တာက မိမိတို့ရဲ့ Gmail password ကို မခွေ့ငျးပါပဲ။ ကိုယျ့ password ကို ကိုယျမမှတျမိသူမြား စာအုပျလေးတဈအုပျနဲ့ မိမိအခနျးထဲမှာဖွဈဖွဈ ရေးမှတျထားသငျ့ပါတယျ။ နောကျထပျ ကွုံရတဲ့ အခကျအခဲတဈခုက Two Step Verification ခံထားတာမြိုးပါ။ မိမိ Account ကိုဝငျရောကျနိုငျဖို့အတှကျ ဖုနျးနံပါတျကို ကုဒျပို့တာအောငျ လုပျထားတယျ။ ပွီးတော့ Backup code လညျး ကူးယူမထားမိတာမြိုး၊ ပိုဆိုးတာက အဲသညျ Two Steps ခံထားတဲ့ ဖုနျးကဒျကပါ ပြောကျသှားတဲ့ဖုနျးထဲ ပါသှားတာမြိုးဖွဈတတျခွငျးပါ။ ဒါမြိုးတှေ မကွုံစဖေို့ Backup Code တှကေိုပါ စာအုပျလေးတဈအုပျမှာ ရေးမှတျထားသငျ့ပါတယျ။ two steps ခံမထားတဲ့ account တှဆေိုရငျတော့ အလှယျတကူ ဝငျလို့ရပွီပေါ့။
Account ဝငျပွီးသှားတာနဲ့ Find My Device မှာ ရှာလို့တှနေို့ငျပွီဖွဈပါတယျ။
အထကျပါပုံတှမှော ဖုနျးကနေ ဝငျကွညျ့တဲ့အခါ မွငျရတဲ့ပုံစံမြိုး ပွထားပါတယျ။ အဲသညျမှာကွညျ့ရငျ ကြှနျတျောတို့ဖုနျး ဘယျရောကျနလေဲဆိုတာ မွငျနိုငျမှာဖွဈသလို ပိုပွီးလုံခွုံအောငျ Secure mode ထဲကနေ Lock လှမျးခလြိုကျတာမြိုး၊ အထဲကဖိုငျတှကေို ဖကျြပဈတာမြိုးတှေ လုပျဆောငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ကှနျပြူတာ Browser ကနေ မွငျရတဲ့ ပုံစံဖွဈပါတယျ။ လကျရှိ ရောကျနတေဲ့နရောကို အတိအကကြို မွငျနရေပါတယျ။
ကွိုတငျပွငျဆငျနညျး - ၂
Family Locator app by Life360 သညျလညျး အလားတူ သုံးနိုငျသော App တဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ မိမိရဲ့ မိသားစုဝငျတှထေဲက ဖုနျးတှမှောပါ ထညျ့သှငျးထားနိုငျပွီး သူငယျခငျြးအပေါငျးအသငျးမြားနှငျ့လညျး ခြိတျဆကျထားနိုငျပါသေးတယျ။ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ Chatting လညျးလုပျနိုငျသလို ဖုနျးဘယျနရောမှာရှိနတေယျဆိုတာကိုလညျး ကွညျ့နိုငျမွငျနနေိုငျကွပါတယျ။ သုံးရတာလှယျကူပွီး Function ပိုစုံတာကွောငျ့မို့ သူ့ကိုလညျး အသုံးမြားကွပါတယျ။
မိမိခဈြသူ ဘယျရောကျနလေဲဆိုတာ သိနိုငျဖို့၊ မိမိခငျပှနျး ဘယျမှာဆိုတာ Check နိုငျဖို့အတှကျ ဒါကို သုံးနိုငျပါတယျခငျဗြ 😋😋😋😋
Family Locator App ကို Download ယူရနျ နှိပျပါ
ကွိုတငျပွငျဆငျနညျး - ၃
Cerberus Anti Theft ကိုလညျး ဖုနျးပြောကျရှာရာမှာ သုံးနိုငျပါတယျ။ ဖုနျးပြောကျသှားတဲ့အခါ Lock လုပျနိုငျတယျ။ Silent ဖွဈနရေငျတောငျမှ ဖုနျးမွညျသံတှထှေကျအောငျ လုပျနိုငျတယျ၊ ဒတောတှကေို လှမျးဖကျြနိုငျတယျ။ ကငျမရာ၊ မိုကျခရိုဖုနျး စတာတှကေို လှမျးပွီးအသုံးပွုနိုငျပါသေးတယျ။
advanced features အနနေဲ့ App icon ကိုပါ ဖြောကျထားနိုငျသေးတာမို့ ဖုနျးခိုးခံလိုကျရတဲ့အခါ ရသှားတဲ့သူအနနေဲ့ မိမိ ဖုနျးရဲ့ password ကိုသိနလေို့ ဖှငျ့လို့ရရငျတောငျ app ရှိနတောမသိနိုငျတဲ့အတှကျ အခြိနျပိုရနိုငျပါတယျ။ Cerberus website သို့မဟုတျ SMS ကနတေဈဆငျ့ ထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့ အခွားဖုနျးနံပါတျတှဆေီ sms ပို့ပေးတာမြိုး စတာတှနေဲ့ ဖုနျးရယူထားသူက ဖုနျးကဒျလဲလိုကျရငျတောငျ ကြှနျတျောတို့သိဖို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။
Download: Cerberus anti theft
ကွိုတငျပွငျဆငျနညျး - ၄
လုပျဆောငျခကျြတှကေ ကှာခွားမှု သိပျမရှိလို့
ကွိုတငျပွငျဆငျနညျး - ၅
Download: Where's My Droid
အထကျပါနညျးလမျးတှအေပွငျ Built-in ပါလာတဲ့ နညျးလမျးတှကေိုလညျး သုံးနိုငျပါသေးတယျ။
ဥပမာ - Xiaomi ဖုနျးတှမှော China ROM ကိုသုံးတဲ့ ဖုနျးတှမှောတော့ Google Service တှေ ပါဝငျထားခွငျးမရှိဘဲ ထပျထညျ့မှ ရပါတယျ။ Google Play Service လညျး error ရှိနိုငျသေးတာကွောငျ့ Google Find Device ကို သုံးတဲ့အခါ မတိကတြာလညျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ Global ROM တှမှောတော့ တိကပြါတယျ။
အဲသညျလို အခွအေနမြေိုးမှာတော့ Xiaomi ရဲ့ Built-in Find Device function ကိုပဲ mi account နဲ့ ခြိတျဆကျသုံးသငျ့ပါတယျ။
Setting ထဲမှာ Mi Account အတှကျ ပါရှိပွီး Account ဖှငျ့ရ လှယျကူပါတယျ။ Password ကို မမသေ့ငျ့သလို ကြှနျတျောတို့ဖုနျးထဲမှာ ထညျ့ထားမယျ့ ဆငျးကဒျနဲ့ အကောငျ့ဖှငျ့တာမြိုး အားမပေးပါဘူး။ ဖုနျးရသှားတဲ့သူက Account ကိုပါ reset ခယြူသှားရငျ ဖုနျးရော အထဲက ဒတောတှပေါ လှယျလှယျလေး ပါသှားနိုငျလို့ပါ။ ဒါကွောငျ့ ဖွဈနိုငျရငျ mail တဈခုခုနဲ့သာ Account ဖှငျ့ထားသငျ့ပါတယျ။
Xiaomi မှာဆို Mi Account
Meizu မှာဆို Flyme Account
Samsung မှာဆို Samsung Account
iPhone တှမှောတော့ iCloud Account စသညျဖွငျ့ပေါ့။ Built-in ထညျ့သှငျးပေးထားတဲ့စနဈတှကေိုလညျး သုံးနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ အထကျပါပုံမှာတော့ Xiaomi ရဲ့ Mi account ကနေ ဝငျကွညျ့နိုငျတာကို ပွထားပါတယျ။ Find Device ကနေ ဝငျရှာရငျ ရောကျရှိနတေဲ့နရောကို နီးကပျစှာ မွငျတှရေ့နိုငျပါတယျ
အထကျပါနညျးလမျးတှကေို ကွိုတငျပွငျဆငျထားရငျ ကြှနျတျောတို့ဖုနျး ပြောကျသှားတဲ့အခါ ပွနျရှာလို့ တှနေို့ငျပါတယျလို့ တဈထဈခြ မှတျယူမထားသငျ့ပါ။
၁။ ကြှနျတျောတို့ဖုနျးမှာ အငျတာနကျ ဖှငျ့ထားမှသာ ဖွဈပါမယျ။
ဒီအခကျြက ကြှနျတျောတို့ အမြားစုနဲ့တော့ ဆနျ့ကငျြဘကျအခကျြတဈခုပါပဲ။
ဖုနျးထဲမှာ ဘမေရှိတာတို့၊ အငျတာနကျကို Facebook သုံးခြိနျလောကျသာ ဖှငျ့သုံးပွီး ကနျြတဲ့အခြိနျတှေ ပိတျထားတာတို့ ဆိုရငျတော့ ဖုနျးပြောကျသှားတဲ့အခြိနျ အငျတာနကျ ဖှငျ့မထားတဲ့အခါ အဆငျပွမှော မဟုတျပါဘူး။ (ကြှနျတျောကတော့ အငျတာနကျ အမွဲဖှငျ့ထားပါတယျ)
အမွဲတမျး ဖှငျ့ထားနိုငျဖို့အတှကျလညျး ဘမေခိုးတဲ့ ကဒျတဈခုရှာပွီး ဆောငျထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့ 😛
MPT, Telenor, Ooredoo တှေ အားလုံးက လိုတာထကျ ပိုဖွတျနတောခညျြးပမေယျ့ ကဒျတိုငျးဖွဈတာ တော့ မဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောဆို သုံးကဒျလောကျစမျးမှ ဘခေိုးမခံရတဲ့ကဒျ တဈကဒျ ရတယျ။ အဲလို 😝😝 MyTel တော့ ကြှနျတျော မသုံးဖူးလို့ ကောငျး မကောငျး မပွောဘူးနျော။
၂။ အငျတာနကျကို အလှယျတကူ ပိတျလို့ရအောငျ လုပျမထားသငျ့ပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ဖုနျးတှေ Lock ခထြားပမေယျ့ Lock Screen ပျောမှာကို Noti Bar ကိုဆှဲခပြွီး အငျတာနကျ ဖှငျ့လို့ပိတျလို့ရတာတှေ ရှိရငျ setting ကနေ ဖယျထားဖို့ လိုပါမယျ။ net အဖှငျ့အပိတျနဲ့ Air Plane Mode တှကေို ဖယျထားလို့ရရငျ ဖယျထားလိုကျပါ။ ကြှနျတျောတော့ အားလုံးဖယျထားပါတယျ။ အငျတာနကျက အမွဲဖှငျ့ထားဖွဈမှာဖွဈလို့ အဖှငျ့အပိတျကို Noti Bar မှာ ဖျောမနတေော့ပါဘူး။
၃။ အဓိကအကဆြုံးအခကျြက ဖုနျးမပြောကျအောငျသာ ဂရုစိုကျပါ။ ပြောကျသှားမှာ ပွနျရှာနရေတာထကျ မပြောကျအောငျ ထိနျးသိမျးတာက အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ကိုယျ့ရဲ့ လြို့ဝှကျအပျတဲ့ပုံတှေ ဗီဒီယိုတှကေိုလညျး SD နဲ့ လုံးဝ မသိမျးမိပါစနေဲ့နျော။ အငျတာနကျကနေ ပြံ့သှားနိုငျလို့ပါ။
၄။ ပြောကျသှားတဲ့အခါ ပွနျရ မရဆိုတာကတော့ ယူသှားတဲ့သူနဲ့ပဲ သကျဆိုငျပါမယျ။
အခြို့ဆို Lock ကနြလေို့ သုံးလို့တောငျ မရတဲ့အခွအေနကေိုတောငျမှ ပွနျမပေးဘဲ ဒီတိုငျးပဲ ကိုငျထားတဲ့သူတှလေညျး ရှိနတေတျပါတယျ။
ညအိပျခြိနျလေးကိုဖဲ့ပွီး အိပျငိုကျနတေဲ့ကွားက တငျပေးလိုကျပါတယျခငျဗြာ။
ဖုန်းပျောက်ဖူးကြသူ အတော်များများ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဖုန်းပျောက်ဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အခါ ဘယ်လိုပြန်ရှာ ကြမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းက လူအတော်များများအတွက် သိချင်စိတ်အပြင်းဆုံးမေးခွန်းအမျိုးအစားထဲ ပါနေပါတော့တယ်။
ဖုန်းပျောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောမှာဆိုတော့ ဖုန်းပျောက်တဲ့အခြေအနေ နှစ်ရပ် ခွဲလိုက်ရအောင်။
၁။ ဖုန်းဝယ်လာကတည်းက Screen lock လေးပဲ ချထားတယ်။ ကျန်တာ ဘာမှလုပ်မထားဘူး
၂။ ဖုန်းဆိုတာပျောက်တတ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ ပျောက်သွားတဲ့အခါ အဆင်ပြေစေဖို့ ကြိုတင်စီစဉ်ထားတယ်။
အထက်ပါ အစုနှစ်ခုမှာတင် ဘယ်သူကတေ ပြန်ရနိုင်မယ်။ ဘယ်သူကတော့ ပြန်ရဖို့ခက်တယ် ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ အုပ်စု ၁ မှာသာ ပါခဲ့ရင်တော့ ဖုန်း ရသွားတဲ့သူက လာပြန်ပေးမှသာပြန်ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်းတွေပျောက်ရှတာတွေကို မပြောခင်ပေါ့။ စကားနည်းနည်း ရှည်ပါရစေ။
ယနေ့ခေတ်မှာတော့ ဖုန်းတွေမှာ အသုံးပြုသိုလှောင်မှုများလာတာနဲ့အမျှ သိုလှောင်နိုင်စွမ်းမြင့်မားတဲ့ Storage ပမာဏကို ထည့်သွင်းလာကြပေမယ့် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူအများစုကတော့ SD card ထပ်စိုက်လို့ရတဲ့ ဖုန်းတွေကိုသာ ပိုမိုနှစ်သက်နေဆဲ ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ SD ကဒ်စိုက်သုံးလို့ရတော့ ပိုမကောင်းဘူးလားလို့ မေးစရာရှိပါမယ်။ SD ဆိုတာ Internal Storage လောက် လျင်မြန်ခြင်းရှိ မရှိ စတာတွေ မပြောတော့ပါဘူး။
ခုလို ဖုန်းပျောက်တာ (ရိုးရိုးပျောက်တာရှိမယ်၊ ခိုးခံရတာလည်းရှိမယ်) ကြုံတဲ့အခါ Information Security လို့ခေါ်တဲ့ချက်အလက်လုံခြုံရေးနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို SD ထဲမှာ ထားမိထားရင်တော့ ဖုန်းပျောက်တာထက် ဆိုးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုး ကြုံရနိုင်ပါတယ်။
မိမိတို့မိမိ လျှို့ဝှက်ရိုက်ထားမိတဲ့ ပုံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုတော့ SDံ ထဲမှာ ဘယ်တော့မှ မသိမ်းမိအောင် ဂရုစိုက်ကြစေလိုပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့ SD မလိုတဲ့ဖုန်းတွေကိုသာ ရွေးချယ်သုံးသင့်ပြီး SD ကို အားမပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Storage များတဲ့ (32GB, 64GB, 128GB, 25GB, ..) ဖုန်းတွေကိုမှ ဝယ်မသုံးနိုင်တာလို့ ပြောကောင်း ပြောမယ့်သူတွေ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ် ဖုန်းတိုင်းနီးပါးမှာတော့ OTG လို့ခေါ်တဲ့ USB One The GO သုံးလို့ရအောင် ဖန်တီးပေးထားတာမို့လို့ OTG stick တွေကိုသုံးပြီး သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ (OTG မပျောက်အောင်တော့ ဂရုစိုက်ရပါမယ်)
IMEI သိတယ် ဖုန်းကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ?
ဒါကတော့ ကျွန်တော့်ဆီ မေးလာတဲ့လူတိုင်းနီးပါး ပထမဆုံးမေးလေ့ရှိတဲ့ မေးခွန်းပါ။ IMEI ဆိုတာ International Mobile Equipment Identity ကို အတိုကောက်ရေးထားတာဖြစ်ပြီး SIM card ထည့်ပြီးသုံးရတဲ့ device တိုင်းမှာပါတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ကမဿဘာလုံးမှာ တူညီတဲ့နံပါတ် နှစ်ခု မရှိဘူးလို့ ဘယ်လိုပင်ပြောပြော ကျွန်တော်ကတော့ တကယ် မယုံပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ တွေ့ရအများဆုံးသော ဖုန်းတွေသည် China က လာပါတယ်။ IMEI တွေ ထပ်နေတဲ့ China Phone တွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့နဲ့ IMEI တူတဲ့သူ မရှိနိုင်ဘူးလို့တော့ တစ်ထစ်ချ တွေးမထားသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် China Mobile Company (Mandalay) မှာ IMEI နံပါတ်တွေကို အလုံးရာထောင်ချီ ပြောင်းပေးခဲ့ရဖူးသလို သူတို့ဘာသာ ဖန်တီးထားတဲ့ သူတို့နာမည်တံဆိပ် နဲ့ IMEI နံပါတ်တွေပါတဲ့ ကပ်ခွာ (စတစ်ကာ) တွေ ထိုင်ကပ်ပေးခဲ့ရဖူးပါတယ်။ (အဲသည်မှာ တစ်လတိတိ အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်)
ဒီတော့ IMEI ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အားကိုးလို့ရမယ့် အရာတစ်ခုလို့ တစ်ထစ်ချ မသတ်မှတ်ထားသင့်ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က IMEI သိရုံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ ရောက်ရှိနေတဲ့ တည်နေရာကို ရှာလို့ရတယ် ဆိုတာလည်း လုံးဝ လုံးဝ မမှန်ပါဘူး။ IMEI ကိုလည်း သိရမယ် အဲသည်ကနေတစ်ဆင့် ပြန်ရှာရာမှာ ကူညီပေးနိုင်မယ့် Application ကိုလည်း ထည့်သွင်းထားမယ်ဆိုမှသာလျင် ဖြစ်နိုင်ချေ အနည်းငယ် ရှိပါလိမ့်မယ်။
IMEI နံပါတ်ကို သိချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းထည့်တဲ့ Box မှာလည်း ပါသလို မည်သည့်ဖုန်းမှာမဆို အောက်ပါအတိုင်း ရိုက်ထည့်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
*#06# ကိုခော်လိုက်ရုံနဲ့ အထက်ပါအတိုင်း IMEI နံပါတ်တွေကို မြင်ရပါမယ်။
Setting ထဲကနေလည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Setting ထဲမှာတော့ About Phone ထဲမှာ ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့ ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ အချို့ဖုန်းတွေမှာ About Phone ထဲ ဝင်ရုံနဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အချို့ဖုန်းတွေမှာတော့ About Phone >> Status >> IMEI Information စသည်ဖြင့် အဆင့်ဆင့် ဝင်ကြည့်ရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။
ဖုန်းဘူးခွံပော်က IMEI ပုံစံနဲ့ iPhone တွေမှာဆိုရင် နောက်ကျောမှာ IMEI နံပါတ်တွေ ပါတဲ့ပုံစံကို အောက်ပါပုံမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Single SIM လို့ခော်တဲ့ SIM တစ်ကဒ်ပဲ သုံးရတဲ့ဖုန်းတွေမှာတော့ IMEI နံပါတ်တစ်ခုသာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး Dual SIM ထည့်သုံးလို့ရတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ IMEI နှစ်ခု တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
IMEI ဆိုတာ ကြည့်ရတာလည်း လွယ်လွန်းသလို ပြောင်းရတာလည်း လွယ်လွန်းလို့ ဖုန်းပြန်ရှာတဲ့နေရာမှာတော့ အားကိုးလို့ မရနိုင်ပါ။
IMEI နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြခြင်းသာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းလည်း ပျောက်သွားတယ် IMEI ပဲသိပြီး ကျန်တာ မသိဘူးဆိုရင်တော့ ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းကိုခော် လက်ခံဖြေရင် ပြန်တောင်း ပြန်ပေးရင်ယူ မဟုတ်ရင်တော့ လှူ လိုက်တာ ကုသိုလ်ရပါတယ်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်နည်း - ၁
ခုနောက်ပိုင်း Android Version တွေလည်း မြင့်လာသလို လုံခြုံရေးစနစ်တွေလည်း အားကောင်းမောင်းသန် ရှင်သန်လာတာကို တွေ့ရပါမယ်။ လုံခြုံရေးကို ထည့်စဉ်းစားတဲ့ ဖုန်းတိုင်းလိုလိုမှာ ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေအပြင် ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခါ ရှာဖွေနိုင်ဖို့စနစ်တွေကိုပါ ထည့်သွင်းဆန်းသစ်လာကြပါတယ်။ Google Service ကောင်းစွာရတဲ့ ဖုန်း(OS) အမျိုးအစားတွေမှာတော့ Google LLC က အခမဲ့ထုတ်ထားပေးတဲ့ Find My Device ဆိုတဲ့ Application ကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ Gmail account တစ်ခုထည့်သွင်းထားဖို့လိုပါမယ်။ Find My Device ကို Google Play Store ကနေ ဒေါင်းယူလိုပါက ဒီစာကြောင်းလေးကို နှိပ်ပါ။ App ထည့်သွင်းပြီးပါက Setting မှာ ပြင်ဆင်စရာလေးတွေ ကျန်ပါသေးတယ်။
Security & lock screen ဆိုတဲ့ထဲဝင်ပါ။
Device administrators ဆိုတဲ့နေရာအထိ ဆင်းလိုက်ပါ။
Device Administrator ထဲက Find My Device ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမှန်ခြစ်လေး ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင် Back ပြန်ထွက်ပါ။
အထက်ပါ သုံးပုံရဲ့ ညာဘက်အစွန်ကပုံလို Find My Device မှာ On ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ On မဖြစ်သေးရင် ဖွင့်ဝင်ပြီး On လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Setting ထဲမှာ ဆက်ပြင်စရာရှိပါသေးတယ်။ တည်နေရာရှာတဲ့အခါ တိကျမှု ရှိစေဖို့အတွက်
Location ထဲဝင်ပြီး On ထားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်သလို
Mode ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း High Accuracy ဖြစ်အောင် ပြောင်းထားဖို့လိုပါမယ်။
ပိုတိကျစေဖို့ပါ။ အောက်ပါပုံမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Mode မှာ high accuracy ပြောင်းတာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ အောက်ပါပုံမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
High Accuracy ပြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါ အဲသည် Mode အောက်ပါမှာ ရှိတဲ့ Google Location History ဆိုတဲ့ထဲကို နှိပ်ဝင်လိုက်ပါ။ အထက်ပါပုံသုံးပုံရဲ့ ညာဘက်အစွန်ပုံထဲကနေရာပါ။
Location History နေရာမှာ ပိတ်နေရင် ဖွင့်ပေးထားပါ။ ပွင့်နေရင်တော့ ဘာမှလုပ်စရာ မလိုပါ။
အထက်ပါအဆင့်တွေအတိုင်း ထည့်သွင်းထားတဲ့ မိမိတို့ဖုန်းတွေ ပျောက်သွားတဲ့အခါ အခြားဖုန်းတစ်လုံးကနေဖြစ်စေ၊ ကွန်ပျူတာကနေဖြစ်စေ အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အခြားဖုန်းရဲ့ Browser ကိုဖွင့်ပါ။ android.com/find လို့ရိုက်ထည့်ပြီး enter လိုက်ပါ။
မိမိတို့ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းရဲ့ Find Device မှာချိတ်ထားတဲ့ Google Account (gmail) ကို ရှာချင်တဲ့ Browser မှာ ထည့်ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ အခက်တွေ့ကြတာက မိမိတို့ရဲ့ Gmail password ကို မေ့ခြင်းပါပဲ။ ကိုယ့် password ကို ကိုယ်မမှတ်မိသူများ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်နဲ့ မိမိအခန်းထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ရေးမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခုက Two Step Verification ခံထားတာမျိုးပါ။ မိမိ Account ကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက် ဖုန်းနံပါတ်ကို ကုဒ်ပို့တာအောင် လုပ်ထားတယ်။ ပြီးတော့ Backup code လည်း ကူးယူမထားမိတာမျိုး၊ ပိုဆိုးတာက အဲသည် Two Steps ခံထားတဲ့ ဖုန်းကဒ်ကပါ ပျောက်သွားတဲ့ဖုန်းထဲ ပါသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ခြင်းပါ။ ဒါမျိုးတွေ မကြုံစေဖို့ Backup Code တွေကိုပါ စာအုပ်လေးတစ်အုပ်မှာ ရေးမှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ two steps ခံမထားတဲ့ account တွေဆိုရင်တော့ အလွယ်တကူ ဝင်လို့ရပြီပေါ့။
Account ဝင်ပြီးသွားတာနဲ့ Find My Device မှာ ရှာလို့တွေ့နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါပုံတွေမှာ ဖုန်းကနေ ဝင်ကြည့်တဲ့အခါ မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုး ပြထားပါတယ်။ အဲသည်မှာကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ဖုန်း ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ မြင်နိုင်မှာဖြစ်သလို ပိုပြီးလုံခြုံအောင် Secure mode ထဲကနေ Lock လှမ်းချလိုက်တာမျိုး၊ အထဲကဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်တာမျိုးတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကွန်ပျူတာ Browser ကနေ မြင်ရတဲ့ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ရောက်နေတဲ့နေရာကို အတိအကျကို မြင်နေရပါတယ်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်နည်း - ၂
Family Locator app by Life360 သည်လည်း အလားတူ သုံးနိုင်သော App တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်တွေထဲက ဖုန်းတွေမှာပါ ထည့်သွင်းထားနိုင်ပြီး သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားနိုင်ပါသေးတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chatting လည်းလုပ်နိုင်သလို ဖုန်းဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလည်း ကြည့်နိုင်မြင်နေနိုင်ကြပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်ကူပြီး Function ပိုစုံတာကြောင့်မို့ သူ့ကိုလည်း အသုံးများကြပါတယ်။
မိမိချစ်သူ ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာ သိနိုင်ဖို့၊ မိမိခင်ပွန်း ဘယ်မှာဆိုတာ Check နိုင်ဖို့အတွက် ဒါကို သုံးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ 😋😋😋😋
Family Locator App ကို Download ယူရန် နှိပ်ပါ
ကြိုတင်ပြင်ဆင်နည်း - ၃
Cerberus Anti Theft ကိုလည်း ဖုန်းပျောက်ရှာရာမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အခါ Lock လုပ်နိုင်တယ်။ Silent ဖြစ်နေရင်တောင်မှ ဖုန်းမြည်သံတွေထွက်အောင် လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒေတာတွေကို လှမ်းဖျက်နိုင်တယ်။ ကင်မရာ၊ မိုက်ခရိုဖုန်း စတာတွေကို လှမ်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။
advanced features အနေနဲ့ App icon ကိုပါ ဖျောက်ထားနိုင်သေးတာမို့ ဖုန်းခိုးခံလိုက်ရတဲ့အခါ ရသွားတဲ့သူအနေနဲ့ မိမိ ဖုန်းရဲ့ password ကိုသိနေလို့ ဖွင့်လို့ရရင်တောင် app ရှိနေတာမသိနိုင်တဲ့အတွက် အချိန်ပိုရနိုင်ပါတယ်။ Cerberus website သို့မဟုတ် SMS ကနေတစ်ဆင့် ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့ အခြားဖုန်းနံပါတ်တွေဆီ sms ပို့ပေးတာမျိုး စတာတွေနဲ့ ဖုန်းရယူထားသူက ဖုန်းကဒ်လဲလိုက်ရင်တောင် ကျွန်တော်တို့သိဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်နည်း - ၄
လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ကွာခြားမှု သိပ်မရှိလို့
ကြိုတင်ပြင်ဆင်နည်း - ၅
အထက်ပါနည်းလမ်းတွေအပြင် Built-in ပါလာတဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုလည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
ဥပမာ - Xiaomi ဖုန်းတွေမှာ China ROM ကိုသုံးတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Google Service တွေ ပါဝင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ထပ်ထည့်မှ ရပါတယ်။ Google Play Service လည်း error ရှိနိုင်သေးတာကြောင့် Google Find Device ကို သုံးတဲ့အခါ မတိကျတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Global ROM တွေမှာတော့ တိကျပါတယ်။
အဲသည်လို အခြေအနေမျိုးမှာတော့ Xiaomi ရဲ့ Built-in Find Device function ကိုပဲ mi account နဲ့ ချိတ်ဆက်သုံးသင့်ပါတယ်။
Setting ထဲမှာ Mi Account အတွက် ပါရှိပြီး Account ဖွင့်ရ လွယ်ကူပါတယ်။ Password ကို မမေ့သင့်သလို ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာ ထည့်ထားမယ့် ဆင်းကဒ်နဲ့ အကောင့်ဖွင့်တာမျိုး အားမပေးပါဘူး။ ဖုန်းရသွားတဲ့သူက Account ကိုပါ reset ချယူသွားရင် ဖုန်းရော အထဲက ဒေတာတွေပါ လွယ်လွယ်လေး ပါသွားနိုင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် ဖြစ်နိုင်ရင် mail တစ်ခုခုနဲ့သာ Account ဖွင့်ထားသင့်ပါတယ်။
Xiaomi မှာဆို Mi Account
Meizu မှာဆို Flyme Account
Samsung မှာဆို Samsung Account
iPhone တွေမှာတော့ iCloud Account စသည်ဖြင့်ပေါ့။ Built-in ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့စနစ်တွေကိုလည်း သုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါပုံမှာတော့ Xiaomi ရဲ့ Mi account ကနေ ဝင်ကြည့်နိုင်တာကို ပြထားပါတယ်။ Find Device ကနေ ဝင်ရှာရင် ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကို နီးကပ်စွာ မြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ်
အထက်ပါနည်းလမ်းတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရင် ကျွန်တော်တို့ဖုန်း ပျောက်သွားတဲ့အခါ ပြန်ရှာလို့ တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ တစ်ထစ်ချ မှတ်ယူမထားသင့်ပါ။
၁။ ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာ အင်တာနက် ဖွင့်ထားမှသာ ဖြစ်ပါမယ်။
ဒီအချက်က ကျွန်တော်တို့ အများစုနဲ့တော့ ဆန့်ကျင်ဘက်အချက်တစ်ခုပါပဲ။
ဖုန်းထဲမှာ ဘေမရှိတာတို့၊ အင်တာနက်ကို Facebook သုံးချိန်လောက်သာ ဖွင့်သုံးပြီး ကျန်တဲ့အချိန်တွေ ပိတ်ထားတာတို့ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းပျောက်သွားတဲ့အချိန် အင်တာနက် ဖွင့်မထားတဲ့အခါ အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (ကျွန်တော်ကတော့ အင်တာနက် အမြဲဖွင့်ထားပါတယ်)
အမြဲတမ်း ဖွင့်ထားနိုင်ဖို့အတွက်လည်း ဘေမခိုးတဲ့ ကဒ်တစ်ခုရှာပြီး ဆောင်ထားဖို့တော့ လိုတာပေါ့ 😛
MPT, Telenor, Ooredoo တွေ အားလုံးက လိုတာထက် ပိုဖြတ်နေတာချည်းပေမယ့် ကဒ်တိုင်းဖြစ်တာ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆို သုံးကဒ်လောက်စမ်းမှ ဘေခိုးမခံရတဲ့ကဒ် တစ်ကဒ် ရတယ်။ အဲလို 😝😝 MyTel တော့ ကျွန်တော် မသုံးဖူးလို့ ကောင်း မကောင်း မပြောဘူးနော်။
၂။ အင်တာနက်ကို အလွယ်တကူ ပိတ်လို့ရအောင် လုပ်မထားသင့်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေ Lock ချထားပေမယ့် Lock Screen ပော်မှာကို Noti Bar ကိုဆွဲချပြီး အင်တာနက် ဖွင့်လို့ပိတ်လို့ရတာတွေ ရှိရင် setting ကနေ ဖယ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ net အဖွင့်အပိတ်နဲ့ Air Plane Mode တွေကို ဖယ်ထားလို့ရရင် ဖယ်ထားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တော့ အားလုံးဖယ်ထားပါတယ်။ အင်တာနက်က အမြဲဖွင့်ထားဖြစ်မှာဖြစ်လို့ အဖွင့်အပိတ်ကို Noti Bar မှာ ဖော်မနေတော့ပါဘူး။
၃။ အဓိကအကျဆုံးအချက်က ဖုန်းမပျောက်အောင်သာ ဂရုစိုက်ပါ။ ပျောက်သွားမှာ ပြန်ရှာနေရတာထက် မပျောက်အောင် ထိန်းသိမ်းတာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ လျို့ဝှက်အပ်တဲ့ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း SD နဲ့ လုံးဝ မသိမ်းမိပါစေနဲ့နော်။ အင်တာနက်ကနေ ပျံ့သွားနိုင်လို့ပါ။
၄။ ပျောက်သွားတဲ့အခါ ပြန်ရ မရဆိုတာကတော့ ယူသွားတဲ့သူနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါမယ်။
အချို့ဆို Lock ကျနေလို့ သုံးလို့တောင် မရတဲ့အခြေအနေကိုတောင်မှ ပြန်မပေးဘဲ ဒီတိုင်းပဲ ကိုင်ထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေတတ်ပါတယ်။
ညအိပ်ချိန်လေးကိုဖဲ့ပြီး အိပ်ငိုက်နေတဲ့ကြားက တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။